မော်တင်စွန်း စေတီတော် မြတ်ကြီး၏.. အံ့သြ ထူးဆန်းဖွယ် ( ၁၈ ) ပါး – ရွှေအလင်း
( ၁ ) ညအခါ စေတီတော်အား တစ်ယောက်တည်း အဓိဌာန်ပြီး ( ၇ ) ပတ်ပြီး ရစ်ပတ်ပါက ရွှေသံ ငွေသံ ကြားရခြင်း ။
( ၂ ) ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းက အင်္ဂလိပ်များ အမြောက်မိုး ၊ စက်သေနတ်မိုး ၊ ဗုံးမိုးရွာသော်လည်းကျည်ဆန် တစ်ခုမျှ မခခြင်း ။
( ၃ ) လပြည့် – လကွယ် ရောင်ခြည်တော် လွှတ်လေ့ရှိခြင်း ။
( ၄ ) တောင်ကုန်းနှင့် ပရဝဏ်တွင် ရာသီပန်းတို့ မပြတ်ပွင့်ခြင်း ။
( ၅ ) ညချမ်းအခါ စေတီကုန်းတော်တွင် အမွှေးရနံ့ လှိုင်တက်ခြင်း ။
( ၆ ) ခေါင်းလောင်းများ မတီးဘဲ မြည်တတ်ခြင်း ။
( ၇ ) ယခုထက်တိုင် ရံဖန်ရံခါ ဆွမ်းများဦးအောင် မတင်နိုင်ခြင်း ။
( ၈ ) နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဘုရားပွဲတော် ဖြစ်သော်လည်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ် မရှိခြင်း ။
( ၉ ) နတ်ကျား ၊နတ်နဂါးတို့ ဘုရားလာဖူးသော်လည်း လူတိုိ့ကို ဒုက္ခမပေးခြင်း ။
( ၁၀ ) လပြည့်–လကွယ်တွင် စေတီကုန်းတော်မှ မောင်းသံ၊ ဗုံသံစသော တူရိယာ အမျိုးမျိုးတို့၏အသံကို အရုဏ်ဦးတွင် ကြားရတတ်ခြင်း ။
( ၁၁ ) ဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်ပါက စေတီတော်ကြီးအား အာရုံပြု ဆုတောင်းလိုက် ပါကဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးခြင်း ။
( ၁၂ ) တပေါင်းလ ပွဲတော်ကြီးဖြစ်ခါနီးတွင် ကျီးအုပ်ကြီးများ၊ အမျိုးအမည် မသိသောငှက်အုပ်ကြီးများ တောင်တော်နှင့် စေတီတော်အားပျံဝဲကြခြင်း ။
( ၁၃ ) ဘုရားပွဲတော်တွင် လူအပေါင်း သိန်းသန်းချီ ရောက်သော်လည်း တောင်တော်တွင် လူပြည့်သည်ဟု မရှိခြင်း ။
( ၁၄ ) ဘုရားပွဲတော်တွင်ဆွမ်းတော်တင်တောင်ပုံရာပုံစွန့်ထားသော်လည်းကျီးတစ်ကောင်မျှလာရောက်စားသောက်မှုမရှိခြင်း။
( ၁၅ ) ဘုရားပွဲတော်တွင်လူအပေါင်းသိန်းသန်းချီရောက်သော်လည်း တောင်တော်တွင်လူပြည့်သည်ဟုမရှိခြင်း။
( ၁၆ ) ယုံကြည်စွာဖြင့် စေတီတော်ရင်ပြင်တွင် သစ္စာအဓိဌာန်ကာ ပုတီးစိပ်ပါက ရင်ပြင်တော်မှမြည်ဟိန်းသံ ကြားရတတ်ခြင်း ။
( ၁၇ ) နှစ်စဉ်တပေါင်းလတွင် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဘုရားပွဲတော် မကျင်းပနိုင်ပါက တောင်တော် မြည်ဟိန်းခြင်း ။
( ၁၈ ) စေတီတော်ကို အဝေးမှမြင်ရလျှင် လည်းကောင်း၊ စေတီတော်ပရဝိဏ်သို့ ကြည်ညိုစိတ်ဖြင့်ရာက်မိသည်နှင့် ဖူးမြော်ဦးတိုက်လျှင် ကာယသုခ၊စိတ္တသုခနှစ်ပါးချမ်းမြေ့ရခြင်းဖြင့်…..
ထူးခြားအံ့ဖွယ် ဤ ( ၁၈ ) သွယ် နောင်တော်နဂါးမင်း သစ္စာပြုတည် မြတ်မော်တင်ဘုရား နဂါးဆက်များ ဦးတိုက်ကြတ စ်နှစ်တစ်လဖူးမဝ မော်တင်စွန်းမှာ မြူပျော်ကြတပိုးတွဲလ တပေါင်းည ထူးခြားပွင့်မည်ညဓာတ်အပေါင်းစုံညာ တို့သာသနာ နေရောင် လရောင်ထွန်းလင်းမည်….
နတ်နဂါး သိုက်နဂါး ကောင်းကင်နဂါး တောတောင်နဂါး ကုန်းဂါး ရေနဂါး နဂါးနီ နဂါဖြူ နဂါးစိမ်း ရွှေနဂါး မြွေနဂါးများ အရှေ့ အနောင် တောင် မြောက် ဘောဂဝတီဆွေတော်မျိုးတော်များ နဂါးမင်းကြီး နဂါးမယ်တော်ကြီး၏ အခြွေတော်အရံတော် အနွယ်ဝင်များ ရေစြင်္ကဝလာနဂါးသိုက်ချုပ်ဘိုးဘိုးများ…..
မယ်တော်ကြီးများ ဇေယျသေနနဂါးမင်းနှင့် ညီမတော်များ အမတော်မြနန်းနွယ်တို့မိသားစုနှင့် ၁၀၂၄မျိုးသော သာသနာအကျိုးပြုနဂါးမျိုးနွယ်စုအားလုံးတို့ကြွရောက်ဦးတိုက်သည့် မဟာအောင်မြေဘုရား ဘောဂဝတီမျိုးနွယ်စုအားလုံး၏ ထူးခြားသည့်နယ်မြေ…..
မော် တင် စွန်း ဘု ရား အောင် မြေ သို့ အ ရောက် လှမ်း ဖို့ ဖိတ် ခေါ် ချက် ဖြင့် အောင် စေ ပိုင် စေ အေး ချမ်း စေ ဖို့ ဘ ဝ ဘော ဂ တောင်း တိုင်း တ လို တိုင်း ရ စေ မည့် မြတ် မော် တင် စွန်း ဘု ရား မှာ ဆု တောင်း သ စ္စာ ပြု ပြီး အောင် မြင် မူ အ ပေါင်း ရ ရှိ နိုင် ကြ စေ သ တည်…
( မှတ်သားဖူးသောစာပုဒ်များ )
Credit:Sai Thi Ha
( ၁ ) ညအခါ စတေီတျောအား တဈယောကျတညျး အဓိဌာနျပွီး ( ရ ) ပတျပွီး ရဈပတျပါက ရှသေံ ငှသေံ ကွားရခွငျး ။
( ၂ ) ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈ အတှငျးက အင်ျဂလိပျမြား အမွောကျမိုး ၊ စကျသနေတျမိုး ၊ ဗုံးမိုးရှာသျောလညျးကညျြဆနျ တဈခုမြှ မခခွငျး ။
( ၃ ) လပွညျ့ – လကှယျ ရောငျခွညျတျေျာ လှတျလရှေိ့ခွငျး ။
( ၄ ) တောငျကုနျးနှငျ့ ပရဝဏျတှငျ ရာသီပနျးတို့ မပွတျပှငျ့ခွငျး ။
( ၅ ) ညခမျြးအခါ စတေီကုနျးတျေျာတှငျ အမှေးရနံ့ လှိုငျတကျခွငျး ။
( ၆ ) ခေါငျးလောငျးမြား မတီးဘဲ မွညျတတျခွငျး ။
( ရ ) ယခုထကျတိုငျ ရံဖနျရံခါ ဆှမျးမြားဦးအောငျ မတငျနိုငျခွငျး ။
( ၈ ) နှဈစဉျနှဈတိုငျး ဘုရားပှဲတျော ဖွဈသျောလညျး ခိုကျရနျဖွဈပှားသော ဘေးအန်တရာယျ မရှိခွငျး ။
( ၉ ) နတျကြား ၊နတျနဂါးတို့ ဘုရားလာဖူးသျောလညျး လူတို့ကို ဒုက်ခမပေးခွငျး ။
( ၁၀ ) လပွညျ့–လကှယျတှငျ စတေီကုနျးတျေျာမှ မောငျးသံ၊ ဗုံသံစသော တူရိယာ အမြိုးမြိုးတို့၏အသံကို အရုဏျဦးတှငျ ကွားရတတျခွငျး ။
( ၁၁ ) ဘေးအန်တရာယျမြား ကရြောကျပါက စတေီတျောကွီးအား အာရုံပွု ဆုတောငျးလိုကျ ပါကဘေးအန်တရာယျမှ ကငျးဝေးခွငျး ။
( ၁၂ ) တပေါငျးလ ပှဲတျောကွီးဖွဈခါနီးတှငျ ကြီးအုပျကွီးမြား၊ အမြိုးအမညျ မသိသောငှကျအုပျကွီးမြား တောငျတျောနှငျ့ စတေီတျောအားပြံဝဲကွခွငျး ။
( ၁၃ ) ဘုရားပှဲတျောတှငျ လူအပေါငျး သိနျးသနျးခြီ ရောကျသျောလညျး တောငျတျောတှငျ လူပွညျ့သညျဟု မရှိခွငျး ။
( ၁၄ ) ဘုရားပှဲတျောတှငျဆှမျးတျောတငျတောငျပုံရာပုံစှနျ့ထားသျောလညျးကြီးတဈကောငျမြှလာရောကျစားသောကျမှုမရှိခွငျး။
( ၁၅ ) ဘုရားပှဲတျောတှငျလူအပေါငျးသိနျးသနျးခြီရောကျသျောလညျး တောငျတျောတှငျလူပွညျ့သညျဟုမရှိခွငျး။
( ၁၆ ) ယုံကွညျစှာဖွငျ့ စတေီတျောရငျပွငျတှငျ သစ်စာအဓိဌာနျကာ ပုတီးစိပျပါက ရငျပွငျတျောမှမွညျဟိနျးသံ ကွားရတတျခွငျး ။
( ၁၇ ) နှဈစဉျတပေါငျးလတှငျ အကွောငျးတဈစုံတဈရာကွောငျ့ ဘုရားပှဲတျော မကငျြးပနိုငျပါက တောငျတျော မွညျဟိနျးခွငျး ။
( ၁၈ ) စတေီတျောကို အဝေးမှမွငျရလြှငျ လညျးကောငျး၊ စတေီတျောပရဝိဏျသို့ ကွညျညိုစိတျဖွငျ့ရာကျမိသညျနှငျ့ ဖူးမွျောဦးတိုကျလြှငျ ကာယသုခ၊စိတ်တသုခနှဈပါးခမျြးမွရေ့ခွငျးဖွငျ့…..
ထူးခွားအံ့ဖှယျ ဤ ( ၁၈ ) သှယျ နောငျတျောနဂါးမငျး သစ်စာပွုတညျ မွတျမျောတငျဘုရား နဂါးဆကျမြား ဦးတိုကျကွတ ဈနှဈတဈလဖူးမဝ မျောတငျစှနျးမှာ မွူပြျောကွတပိုးတှဲလ တပေါငျးည ထူးခွားပှငျ့မညျညဓာတျအပေါငျးစုံညာ တို့သာသနာ နရေောငျ လရောငျထှနျးလငျးမညျ….
နတျနဂါး သိုကျနဂါး ကောငျးကငျနဂါး တောတောငျနဂါး ကုနျးဂါး ရနေဂါး နဂါးနီ နဂါဖွူ နဂါးစိမျး ရှနေဂါး မွှနေဂါးမြား အရှေ့ အနောငျ တောငျ မွောကျ ဘောဂဝတီဆှတေျောမြိုးတျောမြား နဂါးမငျးကွီး နဂါးမယျတျောကွီး၏ အခွှတေျောအရံတျော အနှယျဝငျမြား ရစွေင်ျကဝလာနဂါးသိုကျခြုပျဘိုးဘိုးမြား…..
မယျတျောကွီးမြား ဇယေသြနေနဂါးမငျးနှငျ့ ညီမတျောမြား အမတျောမွနနျးနှယျတို့မိသားစုနှငျ့ ၁၀၂၄မြိုးသော သာသနာအကြိုးပွုနဂါးမြိုးနှယျစုအားလုံးတို့ကွှရောကျဦးတိုကျသညျ့ မဟာအောငျမွဘေုရား ဘောဂဝတီမြိုးနှယျစုအားလုံး၏ ထူးခွားသညျ့နယျမွေ…..
မျော တငျ စှနျး ဘု ရား အောငျ မွေ သို့ အ ရောကျ လှမျး ဖို့ ဖိတျ ချေါ ခကျြ ဖွငျ့ အောငျ စေ ပိုငျ စေ အေး ခမျြး စေ ဖို့ ဘ ဝ ဘော ဂ တောငျး တိုငျး တ လို တိုငျး ရ စေ မညျ့ မွတျ မျော တငျ စှနျး ဘု ရား မှာ ဆု တောငျး သ စ်စာ ပွု ပွီး အောငျ မွငျ မူ အ ပေါငျး ရ ရှိ နိုငျ ကွ စေ သ တညျ…
( မှတျသားဖူးသောစာပုဒျမြား )
ကမ္ဘာ့ရေခဲပြင်စကိတ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာ ရွှေတံဆိပ် ဆွတ်ခူး
အသက် ၃၄ နှစ်မှာ အိမ် ၃ လုံး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်အမျိုးသမီး ရဲ့ အံ့ဖွယ်...
“Counterပြန်လာတဲ့ ဗုံးသီးကို တစ်ဖွဲ့လုံးကျသွားမှာစိုးလို့ ဗုံးသီးပေါ်...
နန်းဆုနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတာမဟုတ်ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ GFatt
အလျားပေ ၂၀ လောက်ရှိပြီး ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းကို ဖြတ်ကူးနေတဲ့ Anaconda...